Diabetes – Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ (၁) အစာလျှော့စားပါ ချိုလွန်း၊ ငန်လွန်း၊ အဆီများလွန်းတဲ့...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုသမားတွေမှာ ခြေထောက်အနာဖြစ်တာ၊ ခြေထောက်ဖြတ်ရတာတို့ကို မကြာခဏ ကြားသိနေရပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေထဲမှာ...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူတွေက ကြက်သားနဲ့ သံပရာသီးအများကြီးနဲ့ ပေါင်းစားရင် ဆီးချိုကျတယ်၊ ဆေးသောက်စရာတောင် မလိုကြဘူးလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒါက မှန်ပါသလား။ A. ဒါမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
ရေကြီးတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတို့အတွက် . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုလို ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာ ရေကြီးတဲ့ဒေသက ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်ပါသလဲ။ A. ရေကြီးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုရှိသူတွေက ရေထဲစိမ်နေရတဲ့အတွက် အအေးမိတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ရေနဲ့မထိတွေ့အောင်နေကြည့်မယ်။...